ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဘဝပဲ ...
ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝပါပဲ.. အခုမှ အသိတရားဝင်လာမိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်.. သူလိုကိုယ်လို အလွမ်းဇာတ်တွေထဲမှာ ကိုယ်လဲပဲ ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဇွတ်မှိတ်လွမ်းပစ်ခဲ့မိပါတယ်.. ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ကိုယ်က ဘုရားလောင်းလုပ်ချင်ခဲ့မိတာလေးပါပဲ.. ကိုယ်တိုင်ထွင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ငင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားစရာ ဇာတ်ကောင်အသွင်….
တကယ်တော့ သနားစရာမရှိတဲ့ဘဝပါ.. မှားခဲ့တာလဲ မရှိဘူး.. ထားခဲ့စရာလဲ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး.. ပေးဆပ်စရာလဲ မရှိခဲ့သလို.. ပြန်ရခဲ့စရာလဲ မရှိသင့်ဘူး.. ဟော့ဒီလူမိုက်ကလေ.. တွယ်တာစရာ မနှောင်ငင်သင့်တဲ့ အိပ်မက်ထဲ အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားမိခဲ့တယ်.. ကိုယ့်ဘေးဝန်းကျင်က မျက်ရည်တွေကို ချူငင်ချင်တဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်လေ.. အဆုံးသတ်မှာ မိုက်ရူးရဲ ဆန်တဲ့ အတွေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် တွေးတောပစ်လိုက်တယ်..
အားလုံးဟာ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေပဲ… အဲ့ဒီအတွက် တောင်းပန်ချင်လဲ မှားမိပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားက ရင်ဝကို ဓားနဲ့ထိုးတာထက် ပိုခံစားရမယ်မှန်း သိနေခဲ့တယ်.. ပေးခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်နဲ့ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်တွေအတွက် ကိုယ်မှားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ ပေးစရာ ဖြောင့်ချက်မရှိတော့.. သည်လို လူမိုက်လေ ကြိုးစင်ပေါ်တင်ပီး အခါခါသတ်လဲ မမက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်အတွက်တော့ ဝန်ခံချက် မပေးနိုင်ခဲ့တာ တစ်ခုပါပဲ..
မိုက်မဲလှတဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်ပါ.. အိပ်မက်တွေချည်း မက်ချင်နေခဲ့ပီး လက်တွေ့ကျမယ့် ဘဝအတွက်တော့ နောက်ဆုတ်ခြေတွန့် လေလွင့်ချင်နေခဲ့တယ်.. ဘာကိုများ မျှော်လင့်ပီး ဘာအတွက်များ ရည်မှန်းချက် ထားခဲ့ပါသလဲ.. ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝအတွင်းမှာကို လမ်းခွဲတစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့အတွက်ပဲ စိတ်တွေက ရည်စူးနေခဲ့… မေ့လိုက်ပါလေ.. မေ့လိုက်ပါတော့.. ကိုယ်ဟာ အချစ်နဲ့မထိုက်တန်ပါဘူး.. တွေဝေ နောက်တွန့် သတ္တိမရှိတဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်ပါ..
အချစ်တွေသာ ပေးချင်ခဲ့ပီး အချစ်တွေ ရယူဖို့ကျတော့ နောက်တွန့်နေခဲ့တယ်..
လွဲမှားခဲ့တဲ့ အချိန်ရယ် နေရာရယ်အတွက် ဝမ်းနည်းရမယ်ဆိုလဲ ကိုယ်ကသာ ပိုဆသာအောင် ခံစားပစ်လိုက်ချင်တယ်.. ဒါပေမဲ့ လူနှစ်ယောက် ဘဝတစ်ခု အချစ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ဘက်နှစ်ဘက်က မမျှမတ ခံစားရမှာ အသေအချာ… ဒါမှမဟုတ် ဆတူ….. နာကျင်စေခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုတောင် ပြောမထွက်ရက်ပါ.. တွေဝေမိုက်မဲ ရူးသွပ် မဝေခွဲတတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားတွေနဲ့လူပါ.. မေ့လိုက်ပါ…
(မေ ၁၀၊ ၂၀၁၀၊ ၁၂း၂၅ pm)
at 7:45 AM Labels: ရင်ဖွင့်ရာ အတွေးပုံရိပ်
ဂျူ May 11, 2010 at 9:35 AM
"ကိုယ့်အမှားတွေပါ.. ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေပါပဲ.. " တဲ့။
ဒီလိုလဲ ဘယ်ဟုတ်မလဲ နော်။
မြတ်မွန် May 11, 2010 at 8:32 PM
မှားခဲ့တဲ့ အမှား အတွက် နောင်တရနေမယ့် အတူတူ ...
နောင်မမှားအောင်လုပ်မိဖို့ပဲ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
purplemay May 12, 2010 at 6:21 AM
မှားတယ်လို့ပြောတဲ့သူ အတွက်ကော ၊ အမှားခံရတယ်လို့ ထင်တဲ့သူအတွက်ကော မျက်ရည်ကျမိတယ်....တကယ်....။
မြစ်ကျိုးအင်း May 12, 2010 at 8:22 AM
ဝန်မခံဖြစ်သေးပေမယ့် ကိုယ်တွေလည်း ကိုယ်စီ အမှားတွေ ရှိနေသေးတယ် ညီမလေးရေ ..။
ရလာသမျှက အထိုက်တန်ဆုံး လို့ပဲ မှတ်ယူကြပါစို့။
littlebrook May 12, 2010 at 8:34 AM
ခံစားရတယ် .. ဒါပို့စ်ဆို ပို့စ်မှာပဲပြီးသွားမယ်
Angel Shaper May 13, 2010 at 5:48 AM
ရှေ့လျှောက် လမ်းမှန်ကို လျှောက်လှမ်းနိူင်ပါစေ။
ဖြူ June 19, 2010 at 9:30 PM
အားးးး ချစ်ရယ် အဟင့် မျက်ရည်တောင်လည်မိတယ် မှန်ထဲကြည့်ပြီးဖတ်နေရသလိုပဲ.. နိုချင်ရက်လက်တို့ပါ..
"မေ့လိုက်ပါတော့.. ကိုယ်ဟာ အချစ်နဲ့မထိုက်တန်ပါဘူး.. တွေဝေ နောက်တွန့် သတ္တိမရှိတဲ့ လူမိုက်တစ်ယောက်ပါ."
"နာကျင်စေခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုတောင် ပြောမထွက်ရက်ပါ.. တွေဝေမိုက်မဲ ရူးသွပ် မဝေခွဲတတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားတွေနဲ့လူပါ.. မေ့လိုက်ပါ…"